Waa Maxay HIV, AIDS?
Author Topic: Waa Maxay HIV, AIDS? (Read 38128 times)
« on: November 26, 2007, 07:24:14 AM »
HIV waxay u taagan tahay fayraska hoos u dhiga difaaca jirka bani'aadamka. HIV wuxuu dhaliyaa AIDS.
Astaanta (syndrome) waxaa loola jeedaa cuduro badan oo laga yaabo inay la xiriiraan cudur kale. Xaaladaan, cudurada ka faa'iideysta nidaamka isdifaaca jirka oo daciifa ayaa loo isticmaalaa in AIDs ku ka mid yahay.
# Looga galmooda ferjiga ama dabada qof qaba HIV aana la isticmaalin wax kaa ilaaliya.
# La wadaagida qalabka laysku duro qof qaba HIV.
# Hooyada qabta HIV inay ilmaha qaadsiiso inta uu uurka ku jiro, markuu dhalanayo ama naasnuujinta.
# Galmo afka ah la yeelashada qof qaba HIV oo aan isticmaalin wax difaac ah (badanaa ma dhacdo).
# Astaamaha kuwa dureyga oo kale ah.
# Daal daran oo joogta ah.
# Xumad, qabow iyo dhidid habeenkii.
# Culeyska oo si dhakhsa ah kaaga luma.
# Qanjidhada qoorta oo barara, kilkilada ama gumaarka.
# Dhibco cad cad ama calaamado aan caadi ahayn oo ka soo baxa afka. Calaamado maqaarka ah, ama finan (soo kacsan, siman oo badanaa aan xannuun lahayn oo midab purple leh).
# Qufac joogta ah ama mid qalalan.
# Cunto cunida oo yaraata.
# Baaritaanku waa inuu noqdaa mid iskaa ah oo la sameeyo oo keliya marka la helo ka raali ahaanto (consent).
# Waa in la siiyaa macluumaad ku saabsan waxa ku lugta leh baaritaanka.
# Waa in wada hadal dhacaa waxa micnaheedu yahay in lagu baaro.
# Tallada baaritaanka ka dib.
Daaweyn la'aan dadka qaba HIV ugu danbeyntii way jiradaan, waxaana AIDS ku ku dhici karaa 5-10 sannadood gudahood. Si kastaba ha ahatee, waxaa jira dad tiradoodu aad u yar tahay oo laga yaabo inaysan ka muuqan caafimaadkooda wax hoos u dhac ahi, xitaa 10 sanno ka dib. Wiisatada AIDS waxaa laga yaabaa inay u baahato baaritaano shaybaaro khaas ah.
Su'aalo dheeraad ah ayaan qabaa?
Halkaan ayaa ku weydiin kartaa wixii su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan HIV ama AIDS.
Views: 25024 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 25295 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 20941 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 7671 May 06, 2018, 01:17:25 PM
Views: 7155 January 22, 2019, 08:47:10 PM